Ny hevitra hoe "hipster" dia tonga taminay avy tany Amerika 40-n'ny taonjato lasa. Na izany aza anefa, ireo hipsters dia nantsoina ho mpankafy ny mozika jazz, izay nahazo nalaza tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny, hipsters dia miantso ireo olona izay mijery akaiky ny lamaody amin'ny lamaody (ho hip - ho amin'ny lohahevitra), dia liana amin'ny art, cinema sy mozika "tsy ho an'ny olon-drehetra", sns. Andeha isika hiresaka bebe kokoa momba ny fomba fijerin'ny zazavavy hipsters, ny zavatra henony sy ny fijeriny.
Ahoana no fomba fiakanjo hipsters ho an'ny zazavavy?
Ianao, angamba, misolo tena eo ho eo, toy ny hipsters - dia hafahafa hafahafa avy amin'ny fomba fijery ny olona izay tsy an'io sokajy io. Raha tsy mahita zavatra hafahafa amin'izany ianao ary te-hitafy tahaka izany, dia fantaro ny tsiambaratelon'ny fomba hipsters amin'ny fampifangaroana akanjo marika teti-bola (Gap, Zara, H & M, KixBox) ary zavatra vintage.
Anontanio lehilahy iray eny an-dalambe "Inona no ataon'ireo hipsters?", Ary ireo izay efa nandre momba an'io subculture io dia hiresaka aminao momba ny akanjo voafaritra. Ny hipsters maro amin'ny fahafinaretana dia manao akanjo marefo amin'ny lehilahy ao anaty tranom-borona, mampifangaro azy amin'ny leggings na pataloha ety. Ao amin'ny tontolo hipster, ny ankizivavy sy ny ankizilahy, skinnies ankehitriny dia lamaody - tena mafy, mafy, toy ny hoditra faharoa (noho izany ny anarana), jeans na pataloha. Ny hipsters ihany koa dia mifoka rivotra amin'ny T-shirts, jackets ary T-shirts miaraka amina sary maromaro. Ny ankamaroany dia ny fomba fijerin'i Londres, biby manan-danja nosoratana tamin'ny fomba tsy mahazatra, tsipika hafa amin'ny hipsters sy ny andian-teny amin'ny fiteny samihafa eto amin'izao tontolo izao. Ary satria ny hipsters dia manana ny tanjon'izy ireo hivoaka avy amin'ny vahoaka, dia mitaky zavatra tokana ny fanontana ny t-shirt.
Ny kiraro, ny fitiavana manokana ho an'ireo mpihetsiketsika dia mampiasa mpitaingin-tsoavaly (matetika Convers, fa marika hafa tsy voarara) misy volomparasy mavo, loko sy maitso. Ankoatra izany, ny fialana, ny mpangalatra, ny mpitaingina ary ny lobaka rehetra eo amin'ny sehatra sy ny halimo dia raisina.
Ireo mpihira hipster naoty matetika dia solomaso. Matetika izy ireo dia modely lehibe miaraka amina sary marobe. Ny marika manokana dia Wayfarer sy Ray-Ban.
Sarotra be ny mahita hipster tsy misy kitapo, ary manaja io fitaovana io koa izy ireo. Ny kitapo hipster matetika (natao tamin'ny vintage), toy ny kitapo fanatanjahan-tena miaraka amin'ny famantarana ny Olympiad ao Moscou. Bag bags koa malaza, mety amin'ny sary mampihomehy - hipsters tia mampiseho izao tontolo izao ny esoesony manokana.
Ankoatr'izay, ny hamoronana ny endriny manokana, ny hipsters dia mankafy ny mofomamy marevaka, peta-drindrina marevaka, kavina mamirapiratra sy kofehy, hatsikana, brasele plastika.
Haipstersov ny ankizivavy
Raha mieritreritra ianao fa ny hipsters rehetra dia mandeha miaraka amin'ny hairdo iray ihany, dia diso ianareo - ny fitsipika tsy natao ho azy ireo. Ny volon'ilay hipster dia mety ho tsinontsinona tsy misy dikany, toy ny hoe very daholo ireo naratra tao an-trano. Ny Hipster dia afaka manamboatra volo amin'ny endriny farany, izay mbola tsy nahavita nandresy ny fon'ny vahoaka. Ary koa noho ny fitiavana ny vanim-potoana rehetra, ny hipsters dia afaka manao hairstyles, mifantoka amin'ny sarimihetsika taloha, angamba mainty sy fotsy. Ary mazava ho azy, ny hipster dia hahazo antoka fa mifanaraka amin'ny endriny ny tarehy.
Angamba ianao efa naheno momba ny fitiavan'ny solontenan'ity sokika ity ho sary. Ny hipstera maoderina, na dia eo aza ny firoboroboana fandrosoana, dia mbola mampiasa sarimihetsika sarimihetsika. Ary, alohan'ny hipster dia ny asa hampitana ny fihetseham-po, ny fihetseham-pony, ny endriky ny sary ary ny fahazava ny sary dia tsy manelingelina azy betsaka, raha tsy hoe afa-tsy rehefa mijery izy.
Inona no mihaino hipsters? Miharihary ny valiny - ny mozika indrindra amin'ny lamaody. Ankoatra izany, matetika ireo olona ireo dia tsy mijaly noho ny fiankinan-doha amin'ny mpanakanto rehetra, ary maniry ny hitady vondrona vaovao sy lalao vaovao sy vaovao.
Sary ho an'ny sary fitifirana amin'ny natiora
Amin'ny inona no tokony hipetrahan'ny balotsy?
Amin'ny ahoana ny kiraro mba hitafy jeans?
Karazana kiraro vehivavy - anarana
Ny akanjo amin'ny akanjo mena
Adidin'ny kofehy mainty hoditra
Ireo olo-malaza maoderina indrindra 2013
Sarin'ny sary fitifirana ao amin'ny studio
Amin'ny inona no manao akanjo manga manga?
Fashion ny taona 90
Ny endriky ny dandy
Ny fanomezana ny taona ho an'ny zazavavy
Apetaho amin'ny totozy ho an'ny ankizy
Fijerena telovolana telo - ireo karazana 4 tsara indrindra azo ampiasaina
Ny fihanaky ny biorevitalisation - zava-mahadomelina
Ny menaka varela - ampiasaina amin'ny fikorontanana
Polaroid Points: ahoana no hanavaka ny sandoka?
Sary 32 manaporofo fa tia ny minima ny Japoney
Makrôla eo amin'ny tsato-kazo eo amin'ny takelaka
15 Ny antony hananana fananana manokana
Sakafo amin'ny ety
Ireo Supermodels tamin'ny taon-dasa "Balzac" dia nilaza hoe "Tsia!" Ho an'ny Ageism
Bijouterie ho an'ny Taombaovao 2017
Tati-bavak'i Torkia - votoatin'ny kalorie
Ahoana ny fomba famonoana orkide phalaenopsis?
Inona no mahasoa amin'ny radish?
Inona no fahiratan-tsaina - ny famantarana ny faharanitan-tsaina ambony sy ny olona manan-tsaina indrindra eto amin'izao tontolo izao